Liverpool Oo Stamford Bridge Ku Garaacday Chelsea, Reds Oo Rikoor Cusub U Dhigtay Premier League & Hogaanka Oo Ay Shan Dhibcood Ku Qabteen | Laacib.net
Liverpool Oo Stamford Bridge Ku Garaacday Chelsea, Reds Oo Rikoor Cusub U Dhigtay Premier League & Hogaanka Oo Ay Shan Dhibcood Ku Qabteen
September 22, 2019 Balaleti Comments Off on Liverpool Oo Stamford Bridge Ku Garaacday Chelsea, Reds Oo Rikoor Cusub U Dhigtay Premier League & Hogaanka Oo Ay Shan Dhibcood Ku Qabteen
Liverpool ayaa gaartay guushii lixaad ee isku xigta ee xilli ciyaareedka Premier League ka dib markii ay 2-1 ku dubteen kooxda Chelsea oo marti loogu ahaa Stamford Bridge iyadoo kulana adag uu dhexmaray kooxaha Klopp iyo Lampard.
Reds ayaa rikoor cusub u dhigtay horyaalka Ingariiska ka dib markii ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee labo xilli ciyaareed oo isku xiga badisa lixda kulan ee ugu horeysa xilli ciyaareedka.
Tababare Jurgen Klopp ayaa shaxdiisa labo bedel ku sameeyay kulankii ugu danbeeyay ee Premier League iyadoo Roberto Firmino uu ku soo noqday safka kooxda halka Jordan Henderson uu bedelay Alex Oxlade-Chamberlain.
Dhanka Chelsea tababare Lampard ayaa ku soo bilaabay Mason Mount iyo N’Golo Kante oo dhaawac ka soo kabsaday.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay si adag iyadoo labada kooxoodba ay ahaayeen kuwa taxadar badan muujiyay halka aysan sidoo kale ka xishoonin inay weeraro isku qaadaan xilli horeba.
Laakiin Liverpool ayaa hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 14aad markii laad xor ah loo dhigay afka hore ee xerada ganaaxa markii Christensen qalad ku galay Saido Mane.
Mohamed Salah ayaa kubad u taagay Alexandre -Arnold kaasoo isan darbo fiican oo aad u qurxoon shabaqa ku hubsaday isagoo aan wax fursad ah siinin goolhaye Kepa.
Chelsea ayaa u dhawaatay inay hesho goolka barbaraha daqiiqadii 24aad markii Azpilicueta uu kubad fiican u dhigay Abraham kaasoo kubada la kortagay goolhaye Adrian laakiin darbadiisa waxaa lugta ku soo badbaadiyay goolhayaha Liverpool.
Daqiiqadii 27aad Chelsea ayaa shabaqa soo taabatay markii uu Azpilicuea kubad ka hoos bixiyay goolhaye Adrian, laakiin VAR ayaa ku dhegtay goolka waxaana ay go’aamiyeen inuusan goolka ansax aheyn madaama Mason Mount oo soo dhigay karooskii uu goolka ku yimid ay cagtiisa hal inji offside aheyd.
Seddex daqiiqo ka dib Reds ayaa fursad u heshay inay hogaanka dheereysatay markii laad xor ah loo dhigay mar kale afaafka goolka markii uu Azpilicueta qalad ku galay halkaas, laadkii xorta ahaa ee ay Reds soo qaadeen waxaa madax ku dhaliyay Roberto Firmino.
Labo daqiiqo markii ay socotay qeybta labaad waxaa soo ifbaxday in Chelsea aysan difaacan karin kubadaha karoosyada ah iyadoo Alexander-Arnold uu karoos fiican soo dhigay, waxaa boos fiican ku helay Roberto Firmino laakiin waxaa darbadiisa si cajiib ah u badbaadiyay goolhaye Kepa.
Daqiiqadii 71aad Chelsea ayaa gool soo ceshatay iyadoo N’Golo Kante uu kubad fiican la dhex maray ciyaartoyda Liverpool ka hor inta uusan darbo qurux badan dabamarinin goolhaye Adrian.
Chelsea ayaa ciyaarteeda sarre u qaaday qeybtii labaad iyagoo cadaadis xoogan saarayay kooxda Liverpool, waxaana Blues qaab ciyaareedkooda kalsooni u sii yeelay goolkii qurxoonaa ee uu dhaliyay hanadka reer France N’Golo Kante.
Chelsea ayaa u dhawaatay daqiiqadii 87aad inay hesho goolka barbaraha markii karoos uu soo dhigay Alonso uu madaxa la helay Batshuayi laakiin waxay si ciriiri ah ku hareermartay goolka.
Alonso ayaa mar kale kubad fiican u taabtay Mason Mount kaasoo darbadiisa cirka geliyay xilli uu goolka hortaagnaa. Laakiin ciyaarta waxa ay ku soo dhamaatay 2-1 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool.
Wargeys Isbaanish Ah Oo Soo Saaray Shaxda Xiddigihii Ugu Fiicnaa 10kii Sanno Ee Ugu Danbeysay Iyo Xiddig Premier League Ah Oo Laga Waayay
XOG: 25ka Xiddig Ee Ugu Mushaharka Badan Champions League Oo La Soo Saaray & Liverpool Oo Aan Waxba Ku Laheyn